अझै तीन दिन भारी वर्षा हुने, यी नदीमा आउन सक्छ बाढी ? हेर्नुहोस् बाढी पूर्वानुमान शाखाको सूचना | Nepal Ghatana
अझै तीन दिन भारी वर्षा हुने, यी नदीमा आउन सक्छ बाढी ? हेर्नुहोस् बाढी पूर्वानुमान शाखाको सूचना
प्रकाशित : २ असार २०७८, बुधबार १२:४८
तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै तीन दिन देशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । धेरै वर्षा हुने भएकाले महाशाखाले केही स्थानमा बाढी र पहिराको खतरा औँल्याएको छ । महाशाखाकी मौसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार मनसुनी वायु सक्रिय भएकाले अहिले देशभर पानी परिरहेको छ । यो वायुको प्रभावले आगामी शनिवार सम्म नै देशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ ।
“मनसुनी वायुको प्रभावले अहिले देशका अधिकांश भागमा अहिले वर्षा भइरहेको छ”, बासीले रासससँग भन्नुभयो, “यो वायुको प्रभावले आगामी शनिवार सम्मै देशका अधिकांश भेगमा भारी वर्षा हुने योग छ । त्यसपछि भने यो क्रममा ब्रेक लाग्नेछ ।”
“कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी र वाग्मती प्रदेशको केही भूभागमा भारी वर्षा र थोरै स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको हुनाले उक्त प्रदेशका पहाडी भू–भागमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, नदीनाला तथा खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ”, महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख छ । महाशाखाको नियमित बुलेटिनअनुसार, वर्षाको यो क्रमले बिहीबार र शुक्रवार पनि देशभरि निरन्तरता पाउनेछ ।
बाढी पूर्वानुमान शाखाले आज कहाँ कहाँ बाढी आउँछ भनेर पूर्वानुमानसहितको सूचना जारी गरेको छ।नारायणी, कर्णाली र यसका सहायक नदीमा भने पानीको बहाव केही बढ्ने शाखाले जनाएको छ । यस्तै, कन्काई, कमला, बागमती र यसका सहायक नदी, कोशी, महाकाली र यसका सहायक नदीमा पानीको बहाव सामान्यत रहने र सर्तकता तह भन्दा तलै हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
तराई र चुरेको भूभाग भई बहने साना नदीमा बाढी आउने सम्भावना रहेको शाखाले जनाएको छ ।
बुधबारदेखि तीन दिन भारी वर्षा हुने
दुई दिनसम्म मनसुन कमजाेर, बुधबारदेखि तीन दिनसम्म ठूलाे वर्षा हुनसक्ने
देशभर कमजाेर बन्दै मनसुन, प्रभाव केहीदिन रहने